Maxaa kaa khaldan? Qalinkii Sidiiq Maxamed Burmad | Hayaan News
Maxaa kaa khaldan? Qalinkii Sidiiq Maxamed Burmad
December 11, 2020 - Written by admin
Maaha su’aal aan adiga imika ku waydiinayo, jawaabteedana aan kaa rabo. Laakiin waa su’aal innoo wada wanaagsan in midkasta oo inagga mid ahi gaar ahaantiisa isku waydiiyo. Mid kastoo inaga mid ah markaan leeyahay waxaan u jeedaa dadka inta si sababaysan iila qatba weedhan oo ah (qofna dhamays maaha).
Adoo xisaabta boqolayda qiyaas ahaan ku xisaabinaya, xaqiiqadana aan is diidsiinayn, dadka kuwo aad istaqaannaan iyo kuwo dushaa kaa yaqaanaba isku daroo bulshada intee ayay ka yihiin inta si kal iyo lab ah kaaga raalliya ee guushaada jecel guuldarradaadana neced, agtoodana aan lagugu xaman? Waayo?
Bulshada intee ayay ka yihiin dadka saaxiibtinnimada idinka dhaxaysaa ay dano ku salaysan tahay, balse aanay jirin lexojeclo intaa uga danbaysa oo ay kuu qabaan? Waayo?
Bulshada intee ayay ka yihiin dadka guuldaradaada, gumaradaada, gubashadaada, goohaaga, ganistaada, jabkaaga, ceebtaada, ciilkaaga, cambaarayntaada, dhibtaada, dhaliishaada, dhaawacaaga, xumaantaada, iyo xantaada ku diirsada kuna doogsada? Waayo?
Bulshada intee ayaa xanta ayku xantaan ee warkeedu kusoo gaadho aad ku ogaataa nacaybka ay kuu hayaan balse aan toos kuugu muujin? Waayo?
Bulshada intee ayaa si badheedha qowl iyo ficilba kuugu muujisa nacaybka ay kuu hayaan ama adigu aad u muujisaa? Waayo?
Bulshada muddo intee leeg ayaad cecelis ahaan isku dhacdaan marka laga soo bilaabo xilliga aad is barateen? Ma marka aad sidaa isku barataanba, ma maalmo ka dib, ma bilo ka dib mise markaad muddo dheer isku xidhnaataan? Waayo?
Bulshada intee ayaad isku dhacdaan maalintiiba, toddobaadkiiba, bishiiba ama sanadkiiiba.? Waayo?
Dadka inta ugu badan muxuu yahay waxaad isku qabataan, iskugu dhacdaan ama ku collowdaan? Waayo?
Dadka kuwo aad is disheen iyo kuwo collaadi ama nacayb idinka dhexeeyso dhamaantood markaad dib u eegto wixii aad isku qabateen, ma waxaad aaminsan tahay inaad ka wada saxsanayd oo mid waliba kaa gardarnaa? Waayo?
Bulshada dad intee leeg ayaa idinkoo waxyar isku jiidhay colaadiinnu maalinkasta sii tarantaa oo ay noqotaa mid ka ballaadhan halkii ay ka bilaabantay iyo wixii ay ka bilaabantay? Waayo?
Horta qofka geesiga ah ka astaamehee leh ayaad u taqaannaa? Waayo?
Horta qofka jilicda san qofka astaamehee leh ayaad u taqaanaa? Waayo?
Su’aalahan jawaabahooda adoo kaligaa ah naftaada si sugan ma ugu sheegi kartaa mise way kugu adag yihiin jawaabaha qaarkood? Waayo?
Abuurka dadka waa mid kamida mucjisooyinka alle. kala duwanaanshaha abuurka dadku waa in muuqata ama la dareemo iyo in la fahmo. Inta muuqata way fududahay in aynu isla garanno, oo waxa tusaale kuugu filan in hadii aniga oo siddiiq burmad ah aad iragtay aad ogaato inaan gaabanahay ama dheerahay, inaan dhuubanahay ama buuranahay, inaan casahay ama madoobahay, inaan afgaabanahay ama hadal badanahay, inaan foolxumahay ama quruxbadanahay. Waxase laga yaabaa inay kugu adkaato inaad garato abuurka qof aad aragtay intiisa qarsoon ee aan aragga iyo maqalka lagu qiimayn Karin balse fahanka u baahan. dhibtuna taas ayay ka joogtaa.
Hadii dadka marka la qiimaynayo lagu kala jeclaysto intooda la arko ama la maqlo, oo foolxumadu ay foolxumo ku tahay , quruxina qurux ku tahay, waxaa iyana ka mihiimad ballaadhan kala duwanaansha aadmiga intooda aan la arkin lana maqlin ee fahanka u baahan in lagu kala qiimeeyo laguna kala jeclaysto.
Maxaa kamida inta fahanka lagu garto?
Mararbadan waxaad tidhaahdaa hebel waa fariid, hebel kale waa nacas, heblaayo dulqaad badanaa, kaasi waa mid dabeecad xun, qof wanaagsan ma tihid, anigu waan calool adagahay, ninkaasi waa car itaabo, waa qof iska xidhxidhan, waxkastoo dhaca isagu kaa cadhoon maayo, kalmadda uu qoonsado waligii ma illoobo, dadkoo dhanbaa wada jecel, fartaa gaadha, waa jacjacoor, waa nasab, dadkoo dhanbay iswada haystaan. Waa mid bilaa macni ah, saaxibul caqli ayaad tahay, waa gabadh aad u daggan, dabeecadda ayaan ku jeclaaday, waa bilaa dhiig, ma diiro, waad indho adagtahay, waa bulshaawi, waad gocasho badan tahay, intaasaad ku xumaatay, soo anaani maaha, aduunbaa isla saxsan, waa qof qalbi xaadhan, qof kasta wuu ka cabanayaa, waa qoys fiican.
Hadaladaas marka aad leedahay waxaad qiimaysay abuurka qofka ama dadka aad wax ka sheegayso intooda aan la arkayn ama aan la maqlayn. Markaas waxaa mihiima uun in aad iska hubiso in qiimayntaadaasi xaqiiqada ku salaysantahay. Qiimayntaadu way sugantahay hadii aad si dhaba u fahantay abuurka qofkaas ama dadkaas inta fahanka lagu garto. Hadii qiimayntaadu aanay sababayn lagu qanco lahayn ma sugna. Hadii qiimayntaadu noqoto midaan sugnayn adaa qiimayn u baahan inaad isku samayso ee maxaa kaa khaldan?
Maskaxdeena laba dareen oo ay leedahay ayaa midi yahay ka aad ku garato inaad u baahan tahay hurdo, inaan sidiiq ahay, inaan saaxiibkaa ahay, inaad shaqo tagto, in dagaalku xun yahay, in sinnadu xaarraan tahay, inaad hebel booqato, inaad dabka ka baqto iwm. Dareenkaasi maskaxeed ee aad intaas ku garataa waa mid xaqiiqada ku salaysan, waana ka inta badan inna shaqeeya ee inaan wax kala fahanno inoo suura galiya.
Dareenka labaad ee maskaxdeennu leehay waa caadifad ama kacsanaan. Dareenkani waxa uu aad inoo shaqeeyaa mararka qaar oo ay xaalado gaar ahi inala soo gudboonaadaan.
Labadan dareen ee midna caadifada yahay midna yahay kan aynu wax ku fahanno go’aanada aad arrin kaga falcelinayso ma wada gooyaan ee mid uunbaa falcelinta go’aankeeda yeesha. Ka markaas go’aamadaadu kazoo fulayaan markaa waaka kolba ku shaqaynaya ee awoodda badan.
Dareenka maskaxda ee caadifadda ahi haduu inna kaco dareenkii caadiga ahaa ee aynu wax ku kala garanaynay ma shaqeeyo oo kanaa meesha ka saaraya. Hadii dareenka kacsan ee maskaxdaadu ka awood bato dareenkaaga caadiga ahna waxaad ku hadasho iyo waxaad samaysaaba maaha mid xaqiiqada ku salaysan.
Inaanay hadalka iyo ficilka aad samaysay wakhti dareenkaaga kacsani shaqaynayay aanay saxnayn, oonay sugnayn, xaqiiqada aanay ku salaysnayn waxaad ogaataa marka uu dareenkaasi dago ee uu dareenkaaga maskaxeed qaybta dagani shaqada kusoo noqoto.
Tusaaleyaal kooban oo innoo iftiiminkara in marka dareenka caadifadu inna shaqaynayo waxa aynu samayno iyo waxa aynu ku hadalnaaba aanay ahayn wax sugan oo xaqiida ku salaysan aynu wada eegno.
Qof qofkale si badheedha u dilay ma aragtay ama ma maqashay?
Marka uu usii socdo qofka uu soo dilayo aad ayuu u dhiirran yahay, waxaanu u dagdagayaa inuu hore usoo qaato hubkii uu qudha kaga jari lahaa. is hubayn ka dib waxa uu usoo tallaabeeyaa haddaanu usoo ordinba dhanka qofkii uu rabay inuu dillo. siduu ugu soo degdegayo waxaad mooddaa inuu ka baqayo inuu fursad qaaliya lumiyo. Hadii cidi istidhaa ka baajiya falka uu rabo inuu sameeyo ma yeelo mana fahmo waxa ay u sheegayaan. Muxuu cid fahmaa illeen kaliya waxa uu maqlayaa oo uu dareemayaa kaliya waxa maskaxdiisa ka dhex guuxaya. Qofkaasi markuu soo dilo qofkii uu rabay inuu soo dilo ka waran xaaladiisa? Maxaa iska badalay? Muxuu u naxaa? Muxuu u baqaa? Muxuu u warwaraa? Muxuu u qoomameeyaa falkii uu samayntiisa aadka iyo aadka ugu qanacsanaa?
Wax kale maaha ee markan dareenka maskaxda qaybtii kacsanayd ma mashaqaynayso oo waxa dib usoo noqotay dareenkii maanka ee markii hore la afganbiyay. Imika wuxuu fahmayaa ugu yaraan in dilka uu gaystay dhibta isaga kaga imanaysaa ay ka wayntahay wixii qofkaas ay isku hayeen, imika wuxuu garanayaa in loo dilayo ama aakhiro la cadaabayo, imika wuxuu garanayaa inuu ajasha ka jaray nin toban caruura aabe u ahaa oo uu agoon ka dhigay, imika wuxuu garanayaa inuu ninka walaaladii iyo tolkii joogaan oo uu godobaysan yahay. Intaaba markii dareenka shucuurtu shaqaynayay muu garanayn.
Wali isaga ma aragtay qof jecel qof kaloo isaga neceb. hadii la diiday muxuu uga hadhi waayaa?
Si kastoo loo qanciyo, loogu dhaga hadlo, dhabada looga leexdo, tilifoonkiisa looga dhaco, kulankiisa loo dhibsado oo warkiisa loo dhigdhigo uma dhaadhacsana qofka wax jecel waxaasi. bahdilaada haysata kuma baraarugsana, baryootanka qof aan rabina maalin kama baaqdo. waa qof ay meel kaga dhagtay oo maskaxdiisa wax kale kuma soo dhacaan, waxba kama dhiidhiyo, oo dhiig iyo uus toona maleh ayaa layidhaahdaa. isna waa dhibbane, qofka uu jecelyahayna waa dhibbane oo waxaa dhib ugu filan qofkan ku dhaggan ee dhanna uga leexanla. Dhibta uu qabo iyo ta uu gaysanayo qalbiga wax jeceli midna awood uu ku baajiyo malaha, tagna kuma tago. Hadda garo oo qofkaasi ka hor intii aan jacaylku ku dhicin sidan muu ahaan jirin, dabeecadanna ma lahaan jirin, fiicilada noocan ahna dadka kama yeeli jirin. Isbadalkan ku yimi waxa u sababa dareenka maskaxda ee shaqaynaya ayaa ah ka caadifada, inaad qof jeceshahay dareenka kuu sheegayaa waaka caadifada een xaqiiqada waxba ku salayn. Taas macneheedu waa in jacaylka laftiisu caadifad yahay ee aanu ahayn wax rasmiya oo xaqiiqada ku salaysan.
Marar badan oo qofka wax jeceli ka fikiro inuu iskaga hadho qofkan uu jecel yahay ee kasii jeeda ayaa jira. waliba markaas waxa hor yimaada inta hadal xumo, dhaga hadal iyo naxariis darro uu kala kulmay qofkan uu ku dabo daalay, markaasuu isku boorriyaa inaanu dib ugu noqon una wicin tilifoonkiisa ama tilifoonkeeda. Arimahaas marka uu ka fikirayo waxa muuqata in qaybtii maskaxda ee macquuliyada wax ku qiimanaysay si suganna wax loogu kala garanayay ay shaqaynayso, qaybtii caadifaduna hoos u dagtay. waayo labadaas dareen ee maskaxdu mar wada shaqayn karaan ee miduunbaa hogaanka maankaaga hagaya. Dhibtuse waxay ka joogtaa caaddifada jacaylku way ka wakhti dheertay kana badan tahay caaddifadaha kale ee aadmiga lasoo gudboonaada. kuwa kale waa muddo gaaban sida cadhada, farxadda, hammada iwm. Fikirkaa sugan falanqayntiisa inyar ka dib kiiba maaha qofka wax jeceli oo dareenkii caaddifaddaa shaqada maskaxdiisa la wareegaya, markaasuu is arkayaa isagii oo heblaayo ama hebelkii imika uun uu ka tashanayay ku mashquulsan ka fikirkiisa amaba nambaarkiisa ama namberkeeda garaacaya. Hadaba mushkillada haysata qofka wax jecel markaad dhanwalba ka eegto waa qof aanay garaadkii fahanku shaqaynayn ee caadifadi hagayso.
Dareenada caadifadu ficillada ay qofka galiyaan ama dabeecadaha ay u yeelaan oo badan koodu aanay wanaagsanayn masoo koobi karno oo waxa kaloo kamida xaalladaha ay ku sugan yihiin laba qof oo wada hadalkoodu aanu dood iyo falanqayn ahayn ee uu muran yahay. Mar hadii sheekadoodu muran tahay waxa xaqiiqa ah in midkood ama labadooduba isdiidsiinayaan xaqiiqooyin ku saabsan arrinka ay ka hadlayaan.
Waxaa kaloo kamida gacan ka hadalka ama dagaalka laba qof ama in kabadan dhexmara.
Waxaa kaloo kamida faqa xanta iyo ka sheekaynta xumaanta qof kale ama dadka ku saabsan.
Waxaa kaloo kamida gocashada iyo caloolxumada maankaaga kusoo noqnoqota eed ka seexan waydo.
Waxaa kaloo kamida gardiidnimada kaa muuqata marka adiga iyo qof kale arrintiina cid kale waddo
Waxaa kaloo kamida hanjabaadda, hatigaadda, galiilyada, dareenka galmada, iyo qiirada waxaad dhagaysato ama aragto ay kugu abuuraan.
Marar kooban ayuu mihiim yahay dareenka caadifaddu inuu ku shaqeeyo sida qushuucda looga baahan yahay inaad dareento markaad dikriyayso, quraan akhris ama salad ku jirto, markaad galmo xalaala ku jirto, marka aad aragto dhib ama xaalad laga damqado oo cid haysata oo mudan in aad halkiisa is gaysto si ay u timaado inaad u naxariisayo iwm.
Hadaba ta mihiimka ahi waa in marka xaaladaha qaar ay innala soo gudboonaadaan aynu maskaxdeena ku ilaalino in dareenka qiimaynta sugani hogaamiyo oo caadifadu aanay hoggaanka maanka la wareegin.
Awoodda dadku u leeyihiin inay maskaxdooda ka ilaalilyaan inay qaybta caadifadu shaqayso way kala duwantahay, oo taas lafteedu waa abuur alle. Dad aad iyo aad u tiro yar ayaa awood badan u leh inay xamaha u hayaan isbadbadalka dareenada maskaxda ku yimaad. Dadkaasi waxay awood u leeyihiin in xaallad kasta oo caadifada kicin lahayd kala garashadana meesha ka saari lahayd marka ay lasoo gudboonaato dareenka caadifada ee maskaxda ay kala dagaalamaan inuu hogaanka u qabto. Taasina waxay u suura galisaa inay xaaladahaa adag si sugan u qiimeeyaan oo aanay xaqiiqo ku salaynta arrintaasi seejin.
Dadka intooda u badan marka xaaladaha caadifada maskaxda kiciyaa lasoo gudboonaadaan awoodda ay u leeyihiin waa mid iska dhexdhexaad ah oo inay xakameeyaan iyo inay xakamayn kari waayaanba way dhacdaa.
Halka ay jiraan iyaguna dad badan oo marka xaaladaha dareenka caadifada maskaxda kiciya dareenka macquulka ahna meesha ka saara ay yar tahay awooda ay u leeyihiin inay hogaaminta maskaxdooda kala dagaalamaan dareenka caadifadda ee xaaladahani dhalinayaan.
Qofka markaas awoodda uu u leeyahay inuu xakamaha u hayo is badbadala dareenada maskaxdu ay yar tahay, waxa ku imanaysa in waxkasta oo dad ay isku qabtaan markaba caadifadiisu kacdo oo uu cadhoodo. Mar haduu cadhoodo oo caadifaduna hagayso arinkaasi xal mayeesho waayo kuna dhagaysan maayo, kuna maqli maayo, waxa uu ku doodayana sababayn maayo ileen garashadii sugnayd maba shaqaynayso oo hogaanka maskaxsiida caadifadii ayaa la wareegataye. Markaas waa muranku ha dheerado, nacaybkuna ha bato, ilaa ay gacan ka hadal gaadhayso.
Dadka awoodda ay u leeyihin inay hoggaaminta maankooda ka ilaaliyaan dareenka caadifadu yartay, way cabasho badan yihiin, way colaad badan yihiin, way cadho badan yihiin, way camalxunyihiin, mararna way calmasho badan yihiin oo qofay iska caashaqeen ayay maanta kuu ammaanaan barrina kula caayaan, waana car itaabo.
Dadka caynkani way muran badan yihiin, way male badan yihiin, way maagis badan yihiin, mar walbana cid ayay is haytaan, dadka caynkan ahi way godob badan yihiin, way gef badan yihiin, way guux badan yihiin, way gocasho badan yihiin, way gardarro badan yihiin oo waxna kama garaabaan.
Dadka noocan ah qiimayntoodu wax sugan maaha ee waa mid ku salaysan marba arinka dhexmara wuxuu ku saabsan yahay uun mid ka dhalata. Waa qof wanaagsan hebel ayuu ku odhanayaa manta oo dhanna amaantiisa ayuu kaaga sheekaynayaa waayo wax raalli galiyay ayuu manta kala kulmay. Barri ayuu isla hebelkii uu shalay uun uu kuu ammaanayay ku odhanayaa hebelkaasi waa qof xun caydiisana saacado dhagaha kaaga qaadayaa. Hadaad ka dhagaysan waydo ma ogtahay in adiguna qof xuntahay aad u qorantayay, oo inyar ka dibba uu ku neceb yahay dadka kalena u bilaabayo inuu uga sheekeeyo qofka xun ee uu kii horaba uu ku illoobay oo adiga ah.
Waa kuma qofka xumi? Waa kuma qofka wanaagsani?.
Inuu qofku xun yahay ma waxa muujinaysa inaad fikir ama dan isku diideen?
Inuu qofku wanaagsan yahay ma waxa cadaynaysa danta ama fikirka aad wada qabtaan?
Hadii aad dadka intan ku qiimayso oo aad ku nacdo ama ku jeclaato, qiimaytaadu sax miyaa?
Adoon xaqiiqada is diidsanayn markaad isku noqoto hab dhaqanadan ma isku aragtay?
Hadaad isku aragtay mar kale aan ku waydiiyee imika fahmi kartaa waxa kaa khaldan?
Haddii aad ila fahantay waxa kaa khaldan ma awooddaa inaad caadifadaada xakamayso?.
Sirta noloshu waa inaad fahanto mihiimada ay leedahay inaad maskaxdaada ka ilaaliso in dareenka caadifaddu hoggaamiyo. Haddii aad fahanto waxaad ku dadaalaysaa inaad kordhiso awooddaada aad ku xakamayn karto is badbadalada dareenadan maskaxda oo aanad caadifadu taladaada goyn.
Laba nin ayaa arrin kawada hadlay. Labadii nin waxay ku kala aragti duwanaadeen arrinta ay ka wada hadlayeen, taasi waxay keentay in falanqaynta arrintaasi muran ka noqoto. Labada mid kamida ayay dhankiisa ka timi sababta sheekadu u xumaatay marankana u noqotay. Marba marka ka danbaysa wadahadalku wuu kasii leexanayay waxa laga wada hadlyo, waxaanu isku rogayay is eedayn, is weerar iyo is difaac ay dhalinayeen hadalada guracan iyo garowshiiyo la’aanta mid kamida labadan nin oo xaqiiqada is diidsiinayay. Afxumada uu adeegsanayay kolba waxuu sii kordhiyo waxay gaadhay in isagoo cadho ka bilaabantay sheeko aan buurnayn jiq la ah uu ninkii kale candhuuf wajiga kaga tufo. Dadkii isku dhagaysanayay waxa ay wada arkayeen arrinta laga hadlayay inuu dhamaan kaga wada saxnaa ninka candhuufta lagu tufay. Labada ninba laxaadkoodu wuu u dhammaa oo may kala xubno badnayn. hadii ay xoog noqoto ka candhuufta lagu tufay ayaaba ka tun iyo taagba roonaa inanka candhuufta ku tufay. oo hadii ay dagaal noqoto si alle mooyee itaalkiisa umuu baqayne wuu hubay inuu afka boodhka u dari karo. may jirin sabab kale oo uu uga cabsado madaxna uma ahayn waalidna uma ahayn oo maalintaas ayaaba iskugu horaysay. Labada nin ka dagaallansani marba marka ka danbaysa halka uu hadalka kasii badinayay kana kululaynayay kan isagu wuu sii dabcinayay siina yaraynayay hadalka. Waxaabuse hadalkii jaray markii wajigiisii uu jeclaa inanyari candhuuf kaga tufay. Bal is qiyaas aduu halkaa markay marayso waxaad yeelli lahayd, dabeetona barbar dhig ninkaasi waxa uu yeellay. Wallow wajigiisu aad isku badalay hadana intuu maro agtaallay gacanta kusoo qaaday oo uu candhuuftii iskaga masaxay ayuu meesha iskaga dhaqaaqay.
Dadkii meesha joogay oo buuq bilaabay ayaa labadiiba qabsaday. fikirro iyo talooyin iyo falanqayn bandanna arintaas dadkii way kaga falceliyeen. Inanka candhuufta ninka ku tufay cid waliba way cannaanatay wuuse isla saxsanaa oo caydii uu sii waday ee candhuufaynta ka danbaysay ayaaba wixii hore ka xumayd. ninkase taas ka yeelay ee iska aamusay dad badani waxay ku cannaanteen inuu waxaasoo kale aqbalo. Hadalladii dadku la boobeen ayay ka mid ahaayeen “ kanaaba neef ah, alla miskiinsanaa, waar qofku halkuu u dhimanayaa, waa billaa damiir, fulaynimadu cid walba way kuu jabainaysaa, waar waxaasi wax la yeelo maaha, waar ma waxbaad isku tihiin, waa bilaa kalyo, tanoo kale waa doqoniimo” intaas oo eray oo mar lalasoo wada garab istaagay oo ku wada dhiirigalinayay inuu ninka iska celiyo wuu wada maqlayay waxse saamayn ah go’aankiisii kamay badalin.
Hadii meeshaas aad adigu maalintaas joogto maxaad samayn lahayd?
Ma laga yaaba marka ninkaasi ninka la dagaalami waayo kii kala kasii badbadiyo inaad adigu la dagaalntaba?
Ninka la candhuufeeyay hadii dadkii kale sidaas ula hadleen aduu maxaad ku odhan lahayd?
Qofka waxaas qayrkii ka yeelay ee iskaga tagay waa qof caynkee ah?
Ka waxaas isagu sameeyay walina sii wada waa qof cankee ah?
Labada ninba ma waxbaa ka qaldan mise midbaa qaldan?
Ninka la can dhuufeeyay waa maxay waxa ka qaldan ee dadkaasi oo dhami hadalaas ugu yidhaahdeen?.
Maxaad kula talin lahayd labadaas nin midba gaarkiisa?
Bal adigu kalidaa ka dood, jawaabaha su’aalahaa aad ka bixiso ka dibna ila eeg sababta ninkani ninka candhuufeeyay ula dagaalami waayay isagoo ka xoogroon waliba.
Marka aynu dagaalamayno waxa maskaxdeena taladeeda gooya dareenka kacsan ee caadifadda. Cadhadu waa nooc kamida dareennada caaddifadda. Mar hadii aad cadhooto waxa kaliya ee aad samaynaysaa waa inaad dagdag uga falceliso waxaa kaa cadhaysiiyay. mana jiro wax kale oo aad ka fikiri karto, oo dareenkii kala kuma shaqaynayo xilligaas.
Hadaba ninkani sababta uu sidaas u yeelay may ahayn fulaynimo, oo fulaynimada lafteedu waa caadifad ee caqli maaha. hadii sababta qofku cid weerarka iskaga celinwaayaa fulaynimo tahay wuu naxaa, wuu gariiraa, wadnahaa xoog u garaaca, ama maskaxdaa amar dagdag ah oo aanu xukumin isagu lugihiisa farta inay cararaan oo sidaas ayuu ku baxsadaa. Hadaba ninkani fulayga noocaas ahna muu ahayn, ee wuxuu sidan u sameeyay waxay ahay awoodda uu u leeyahay inuu isbadbadalada dareenada maskaxdiisa ayaa ahayd mid xoogan oo u saamaxday in iyada oo falka intaa leegi lasoo gudboonaaday uu hadana ka horjoogsaday indareenkiisa caadifadeed meesha ka saaro dareenkiisa sida sugan u shaqeeya. Taas macneheedu waa inuu wali si sababaysan oo xaqiiqo ku salayn ah u fikiri karo.
Waxa uu fahmay ileen qaybtii wax fahmaysay way u shaqaynaysaaye in ninkani candhuufta ku tufay nin caqli liita yahay, inuu ninkani isaga laftiisu nin dhibaataysan yahay mar hadii habdhaqankiisu sidan yahay, in hadii siduu rabo ee ah inay dagaalamaan uu yeelo uu dili doono ama isaga la dili doono, inay labadaas kay noqotaaba khasaare u dhali doonto, in khasaarahaas ka dhalandoona dagaalka iyo candhuufta ku taalla aanay isku mid ahay, in candhuuftu maro lagu masaxo uun u baahantahay, khasaaraha uu gaysan lahaase ama isaga soo gaadhi lahaase aanu noqondoonin mid maro lagu maso.
Waxyaabaha kale ee uu ka fikirayay waxa kamida in ninkan candhuufeeyay yahay nin dhibaataysan laftiisu oo kalley dadka uu sidan ku wada ah, cid walba ay isku dilaan kalmado, waagii baryaba dagaalama, ku dhinta waxaan jirin, wax u dila waxaan jirin.
Waxyaabaha uu fahmay waxaa ka mida in ninkani inuu sidan u dhaqmaa aanay ahayn mid uu doortay ee ay tahay awoodda cadhadiisa oo aanu maamuli Karin. In isaguna inuu sidan dagan u fikiro ilaahay karsiisay. Sidaas ay tahay ilaahaybaabu u mahad naqayay aan ka dhigin maskaxdiisa sida ta ninkaas candhuufeeyay.
Hadii aynu isla fahannay ilaa imika labadaas nin keebaad u malaynaysaa inuu yahay geesiga dhabta ah? Waayo?.
Waxyaabaha aad danayso ee aad markasta iyo meelkasta oo aad joogtaba u baahantahay maka mid yihiin qodobadani:- shaqo, hiil, wehel, xog, talo, taakulo, lacag, maamuus, iwm.?
Haa waad u baahaan tahay lkn mataqaanaa cida aad ka hesho ama intaas iyo inka badaniba kaaga xidhan tahay?
Qofkastaa waxa uu xidhiidh joogta ah la leeyahay kooxo dad ah oo uu qoloba danno gaara ula wadaago.
Waxaad isku xidhantihiin dadka aad wada shaqaysaan, marna waxaad isku xidhan tihiin dadka aad wax wada barataan, marna waxaad isku xidhan tihiin dadka aad wada cawaysaan, marna waxaad isku xidhan tihiin dadka aad arringaara wada waddaan, marna waxaad isku xidhan tihiin tolkaaga, marna waxaad isku xidhan tihiin ehelkaaga, marwalba waxaad isku xidhantihiin qoyskaaga.
Qofkasta oo kamida kooxahan aad xidhiidhka wada leedihiin waa inta aad ka hesho waxyaabihii aad u baahnayd ee kor aynu kusoo sheegnay. Sida aanad waxyaabahaas marna uga maarmin ayaanad qofkaskastoo dadkan kamidana aanad uga maarmin waayo iyaga ayay waxyaabahaas aad u baahnayd ku xidhnaayeen.
Waxa laga yaabaa kooxahan inaad qaarkood maalinkasta aad wakhti wada qaadataan, qaarkood cisho dhaaf, qaarkood todobaadkii mar, iwm.
Midkasta oo dadkan aad ku xidhan tahay waa aadame oo maaha dhamays. Waxyaabo uu ku wanaagsan yahay iyo waxyaabo uu ku xun yahayba wuu u dhashay. Qaarkood awood badan uma laha inay dareenkooda caadifadeed ka ilaaliyaan go’aamada talada maskaxdooda.
Dadkaas shaqo ama sheeko arrin ka dhalatay marar badan waad ku kala aragti duwanaanaysaan ama waad isku khilaafaysaan. Hadii markaa xamilkaagu yar yahay ama caadifadaada aanad laftaadu xakamayn Karin halkaas ayaad ku kala dhaqaaqaysaan. Dadka cadhada caadifadu qaaddo marka ay gef tirsanayaan ama cid ka cadhoodaan qowlka ama ficilka ayay kaga jawaabaan waa mid aad u qadhaadh. Haku dhinto ayay hadalka qofka ugu yidhaahdaan, ama siro iyo ceebo waawayn oo hore kalsooni jirtay loogu sheegay ayuu soo ban dhigaa kuna aarsadaa. Taasina waxay keenaysaa in xitaa hadii khilaafkani iska dhamaado cadhaduna labada dhinacba ka dagto aanu jirin waji danbe oo la isku sii ag joogo.Ma ogtahay hadii aanad taas fahansanayn in dadka aad isku xidhan tihiin manta mid aad sidaas u kala dhimanaysaan, barri mid kale, sahandanbe midkale, hadana midkale, midkale, mid kale…….
Natiijadu waxay noqonaysaa in markaa kooxdii asxaabta aad ahaydeen dhamaan aad salaanta la kala baydhaan. Waxaad markaa ku qasbantahay in meeshii idin kulmin jirtay aanad foodda soo galin. Waxa kuu xigaaba waa inaad asxaab kale oo meel iyo sheeko kulmiso aad u guurto oo aad ku waa ku xidhanto. Asxaabtan cusubi maaha malaa’ ig ee iyaguna qofkasta oo kamida wax uu ku wanaagsan yahay iyo wax uu ku xun yahayba wuu leeyahay, wax ku raalli galiya iyo wax aad dhibsato labadaba waad kala kulmaysaa, waxbaad isku aragti ka noqonaysaan waxna waad ku kala duwanaanaysaan. Sidaas markay tahay adoo dabeecadaadii lasoo guuray markaad u timaado ayaamaha hore way ku ixtiraami lkn lagu waari maayo. Oo markaad sheeko wadaag noqotaan ee wax la isku diido ama lagu doodo hadii sidaadii aad u dhalatay aad cadhada xamili waydo iyagana midmid ayaad u kala dhiman doontaan. Waxaad sidaas ku socotaba ee kolba aaad asxaab soo kala dhimmataan adiga ayaa isku soo hadhaya. Dabeecadda noocan ahi macal reerkaaga way kaa duminaysaa.
Dadka markaad mid walba ka cabato, midmidna aad u kala dhimataan waxaad halkaas ku waayaysaa danihii mihiimka kuu ahaa ee bulshada kaaga xidhnaa. Shaqo, sheeko, garab, guubaabo, waano, war , lacag, iyo bariidaba adoo u baahan ayaad ka go’day bulshadii iyo asxaabtii ay qoraalka eebe ka sokow kaaga xidhnayd. Markaa dabeecaddaada ayaad ku wax la’dahay. Markaad ugu yartahay tilifoon nambarka qof aad si wayn ugu baahantahay ayaa lagu odhanayaa hebel waydii habel ayaa hayee, Hebelkuna waa mid aad bari hore waxaan sakaaro ka biirsan ku kala dhimateen. Ogow dadku waa hantiye.
Qore:- Sidiiq Maxamed Burmad